Ifulethi elithokomele, elihlanzekile futhi elimaphakathi ePanama - 6B
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Anny & Adolfo
Ukuhlala endaweni yami kuyisinqumo esihle kakhulu ongasithatha, uzozizwa usekhaya noma ungcono !! Uzofuna ukubuya futhi ... Ungabhuka ngokuzethemba ukuthi uzoba sendaweni enhle, enethezekile, ethule, ehlanzekile, enombono omuhle wechibi, enendawo enhle kakhulu ... futhi ngizohlala ngikhona. baqaphe kakhulu ukukunika isevisi best ungaba.. Siyakwamukela ku-Anny's House @ayahouses
Ifulethi liyindawo enhle kakhulu futhi ethokomele, kithina ukuhlanzeka nokunakekelwa kuyingxenye eyisisekelo yendawo yethu, indawo inamakamelo amabili okulala, i-air conditioning ekamelweni ngalinye nasendlini yokuphumula kusukela iPanama iyizwe elishisayo. Sinezitsha ezidingekayo zokupheka, i-heater yamanzi, i-wifi.
I-TV ene- Fire TV, Apple TV
4.95 ·44 okushiwo abanye
Indawo ye-townhouse imaphakathi kakhulu, sineziteshi zikamasipala ezimbili kulayini wokuqala ngo-6min uhamba “ngokuvumelana ne-google maps” futhi phambi kwendlu yedolobha kunesitobhi se-metrobus, indawo iphephe impela ukuhamba ngokuthula kwengqondo.
Ibungazwe ngu-Anny & Adolfo
Ukunakwa 100% okomuntu siqu ukuze ubasekele kuyo yonke imininingwane abayidingayo
UAnny & Adolfo Ungumbungazi ovelele